Prof. Cabdi Faarah Xassan, Guddomiyihii Jamacadda Ummada Soomaaliyeed: Dadka Soomaliyeed waa in ay wada jir uga hortagaan heshiiska Lagu Bililaqaysanayo dalka Soomaaliyeed
Ku: shacabka somaliyeed
----- aqoonyannada somaliyeed
----- dhammaan waxgarad somaliyeed
----- Wakiilka xoghaya guud ee UN-ka ee somalia
Waxaan ka codsanaynaa dadka somaliyeed oo idil in ay si walba ayagoo wada jir ah uga hortagaan heshiiska bililiqada dalka somaliyeed ee ay wada galeen kuwo sheegana magac dowlad somaliyeed iyo dowlada kenya. Heshiiskaasi sina uguma duwana kuwii hore loogu qaybsaday ee loogu kala jarjartay dalka somaliya labadii qarni ee la soodhaafay ee lala galay odayaal, boqorro iyo suldaamo ayagoo loo ballan qaadayey xukunkooda oo loo adkeeyo iyo ka ilaalin cadawyo dibadeed.
Kuwa maanta leh waxaan matalaynaa dalka somaliaya kama haystaan wax kalsooni ah dadka somaliyeed umana xilsaaran in ay xukumaan. Waa koox si ujeedo badan ah quwado qalaad iyo Un-ku dibada uga soo dhoodhoobeen si un mar dalku u xasilo xaqna uma leh in ay gaaraan haba yaraatee wax go’aan ah oo ayaatiinka fog ee dalka iyo dadka somaliyeed saamaynaya. Xilkoodu wuxuu ku siman yahay xasilinta dalka si dadku u istikhyaar ugu helo in u doorto cida xukumaysa iyo nooca xukun ee u doonayo taaso ayna wali ka meelgaarin. Waxay u badan tahay kooxdani qurbojoog damaaciyiin ah oo mabda’oodu usan dhaafsisnayn tabcasho loo maro dariiq kasta iyo wadaado ka sooman maamul iyo xeerarka bulshada aduunka u yaal. Kooxdan awoodeeda sharci iyo xilkeeda damiir ma gaaraan arrimaha ay faraha la galeen. Kooxdani kama taliso meesha ay heshiiska ku galayso in xad laga sameeyo oo haddii xataa loo baahdo in khubaro loo diro si wax loo qeexo ma tagi karto mana geen karto halkaas khubaro kala talisa arrinta. Ma haysato mana raadinayso khubaro somaliyeed oo kala talisa arrinta dhan walba (all the related implications).
waxa kali ah ee ay samayn karaan waa in ay Nairobi iyo New York ku sixiixaan warqado kenya iyo khubaro ayadu adeegsataa ay soo diyaarsadeen.Waxaa kooxdan ku habboon dadka somalieedna doonayaa in ay arrintan iyo mid kasta oo la mid ah dib loo dhigo ilaa laga helayo dowlad somaliyeed oo ka dhammaystiran xag awoodeed iyo sharciba ( power and legitimacy) leh oo dadku danihiisa ugu aamino si madax banana wax uga gaari karta arrimaha ayatiinka dalka iyo dadka. Ma aha shaabado bug ah oo borso lagu sito oo xataa an lahayn xafiisyo la dhigo in dalka iyo dadka ayatiinkooda siiladaha adunka loogu suuq geysto. Maxa diidaya in arrinta dhammanba dib loo dhigo oo la hakiyo? Addunka oo dhami waa ogyahay in ayna maanta ka jirin somalia dowlad dalka ka talisa oo heshiisyo caalami ah gali kartaa ( aqristow raadi hadaadan maqlin waraysiga bbc ee wasiirka iskaashiga iyo qorshayntu u ku leeyahay seddex saac yaan khubaro kala shiraney arrinta xuduudeynta badda). DHAGAYSO ama soo rogo.
Kama jiro aduunka meelna sharci qofka ku khasbaya wax awoodiisa ka baxasan.sidoo kale ma jiro sharci dowlada somaliaya ku sandulaynaya in ay xuduud ka jeexdo manta meel ayna ka talin oo an gacanteedaba ku jirin. Haddaan u soo noqdo mudadii la dheerayd “wasiirka” somaliyeed ee seddex saac oo ay la tashanayeen khubarada ( oo saan malaynayo ah ajaaniib soo maray Kenya?), wuxuu is moogeysiinayaa wasiirku suu dadka khaldo in dalal badan oo ay ka mid yihiin Spain iyo Marokko, Russia iyo Jaban iyo kuwo kale u khilaaf xuduud badeed ka taagan yahay qarni ku dhawaad iyo wax ka badan ayna arrinta noocaas ahina waligeed ku xallismin saacado iska dhaafe bilo iyo sanado midna. Labada dal ee noo dhaw ee Eritrea iyo Ethiopiya waxaa colaad ba’ani uga aloosantahay mudo dheer dhul aad iyo uga baxaad iyo nafacba yar dhulbadeedka wiilka qurba ka soo shaqo tagey iyo saxiibadi na barayaan in ay seddex saac oo dhan u kuur galayeen oo kala tashanayeen khubaro sidii xad cusub loogu jeexi lahaa( u aqri sidii Kenya loogu shaciyeyn lahaa)xuduud badeedka. Waxaa nasiib darro ah in kuwii shalay na lahaa Ethiopiya dalkeenii qabsatay ay taageeradeena abaalkeeda ka dhigaan in ay suuqgeystaan wixii ka harsanaa dalka somaliya oo ayaga ka hor cidina u bareeri weyday.
Dowlada kenya: dowlada kenya waxay ogtahay in aysan jirin wax dowlad ah oo ka shaqaysaa dalka somalia waxaana u cadeynaynaa sidaa darteed in heshiiskii ay la gashaa kooxda Muqdisha joogta u yahay wax waxba kama jiraan ah (nul and void). Waa heshiis ay la gashay dad an awood heshiis- galid lahayn, wax wakaalad ahna an u haysan hawshaas. Waxaan ku eedaynaynaa isla markaas Kenya in si bareer iyo ogaal ah ay uga qayb galayso bililiqo iyo qabsasho dal deris ah waqti u dowlo la’aan iyo qalalaaso xun ku sugan yahay. Kenya ma aha tii niyeysan lahayd dhul cusub in ay naga qaadato. Way ogtahay waxa ku maqan xageeda
Wakiilka xoghaya guud :wakiilka xoghaya guud u qaabilsan Somaliya waxaan xasuusinaynaa in mas’uuliyada ka saaran ilaalinta madaxbaninida qaran iyo mid dhul ee somaliya u si buuxda u guto oo usan ogolaan asaga iyo UN-ka midna in ay ka qayb noqdaan ama ay si toos ah iyo si dadban midna uga shaqeeyaan kala dhantaalka dalka Somalia ee ay wadato Kenya oo ka faa’iidaysanasa waqtiga adag ee somaliya marayso.
Aqoonyahannada somaliyeed:Waxaan ugu yeeraya aqoonyannada wadaniyiinta ah ee aafada qabiilku ayna indhatirin ee aqoonta u leh xeerarka caalamiga ah iyo kuwa badda in ay dadka somaliyeed u soo bandhigaan dhumucda heshiskan, nuxurka u xambaarsayahay iyo waxa loo baahan yahay in la qabto si loo joojiyo kala dhantaal dalka ku yimaada.
Shacabka Somaliyeed: Waxaan u soo jeedinayaa shacabka somaliyeed dhammaanti in ay ka gudbaan qabiilka iyo qurunka lagu xalaalaysto xaraan kasta ayna u wada sara kacaan joojinta kala dhantaalka ku sucda dalkooda ee ay iimaan laaweyasha dowlada sheeganayaa la wadaan amaba u wadaan danta Kenya.
Mowcidka wasiirku leeyahay Unka yaa naga raba oo lama dhaafaan in an xuduud dib u fiirin u soo gudbino ma aha salaatul-casri dhaafaysa qof muslim ah, UN-kuna ma Allaha aduunka iska leh ee waa urur dowlado danahooda ku wada ilaashadaan tii danaheeda dhibaato uga imaanaysaana ay ka hadasho amaba iska diido dhammaan go’aannadiisa iyo mowcidyada u qabto. Sida an kor ku sheegay ma jiro wax sharci ah oo ku khasbaya dowlad somaliyeed oo magac kali ahaan u jirta in ay qaadato go’aanno ka baxsan awoodeeda oo si abadi ah u saamaynaya dalka iyo dadka somaliyeed. Talada kali ah ee macquulka ahi waa in xuduud- dib- u fiirin waxa ay ku magacaabayaan dhammaan la diidaa ama dib loo dhigaa inta dalka somaliya ka dagayo oo la helayo dowlad xag walba ka dhan iyo aqoonyahanno somaliyeed iyo waqti ku filan oo laga darso arrinta dhan kasta waxa ay huwantahay. Kenya xuduudka way taqaan. waxa ay doonaysaa oo kali ah waa sharciyeysi dhulbadeed ballarsi waana la ogsoon yahay in mar hore ay heshiis kula gashay shirkado shidaal, shidaal ka baarid gudaha xuduud badeed somaliyeed ee dhanka kofureed.
Dadka leh somalibaan matalaynaa(hadayna khiyaamada barbar ka ahayn!!!!) waa in ay si degdeg ah oo an meermeer lahayn u joojiyaan hor cararka kala dhantaalka dalka. Ma aha waqti ku habboon in arrintaas oo kale la dhex galo.
Prof. Abdi Farah Hassan
Guddomiyihii Jamacadda Ummada Soomaaliyeed